Isibuko, uBugcisa kunye neMisebenzi yeFactory Supplier-SHUNDA - i-acrylic yamaplanga etyibilikayo isivalo sokupakisha isipho Ibhokisi ye-OEM kunye neFactory | SHUNDA
* Wamkelekile ngokwezifiso nayiphi na ibhokisi *
Ifanelekile kubugcisa obuninzi, ubugcisa kunye neeprojekthi zokuzonwabisa. Yenza isipho esigqibeleleyo
Ibhokisi yomthi wamaplanga inesiciko esinehenjisi kwaye ilungele ukukrolwa kwetshiphu kunye nokutshisa iinkuni
IBHOKISI YOBUCHULE: Ungayihombisa le bhokisi yobucwebe obungagqitywanga nokuba ufuna
INKUNZI ONGAPHAKALISIYO: Lenziwe ngamaplanga elenza ukuba lihlale ixesha elide
UKUSETYENZISWA KAKHULU: Nika umama, intombi, okanye unkosikazi njengesipho esihle sokuba bagcine ii-trinkets, izacholo, kunye nemihombiso, Ilungele izipho, izinto eziqokelelweyo, okanye zokugcina.
I-100% yeenkuni zeNdalo
Yomelele, yomelele, i-eco-friendly kwaye akukho vumba lihlabayo. Umbala okhanyayo wendalo kunye nokuphela okugudileyo, ogqibeleleyo kwiiprojekthi ze-DIY craft hobby yazo zonke iintlobo.
Isithuba sokuGcina ngakumbi
Ukubonelela ngendawo eninzi, kunye nokukhethwa kombutho. Ingasetyenziswa njengebhokisi yememori, isifuba sobuncwane, ukugcinwa kweeresiphi, ubucwebe, izixhobo, izinto zokuzonwabisa, kunye nantoni na ehambelana nayo.
Izinto eziphathekayo iinkuni zomthi
Yomelele, yomelele, i-eco-friendly kwaye akukho vumba lihlabayo.
Yongeza i-boho twist nakweliphi na igumbi
Ngeli shelufu yodonga eyenziwe ngesandla, ephoswe kwimo yenyanga ekhethekileyo, eyenza inkcazo egqibeleleyo kuyo nayiphi na indawo. Yongeza i-decor yenyanga ekhuthazayo kwigumbi lakho lokuhlala, i-nursery, ikhitshi, igumbi lokulala.
Ukuhlobisa kwe-bohemian yeplanga yexabiso eliphezulu
Yenziwe ngamaplanga, iishelufu zethu zodonga ziqinile kwaye kulula ukuzicoca. Tyala imali kwishelufu yesityalo sodonga eyomeleleyo, ishelufu yekristale, ishelufu yeencwadi eludongeni, ishelufu yeoli ebalulekileyo, okanye ishelufu ye-knick knack.
Jingisa ishelufu yakho edadayo emoyeni
Ishelufu yethu yokuhombisa eludongeni ikulungele ukuxhoma, okongela ixesha kwindibano edinayo. Sebenzisa izikrufu ukuyifaka kulo naliphi na igumbi lendlu yakho kwaye ukhanyise isihombiso sodonga lwakho lwe-boho.
Yothusa usapho lwakho kunye nabahlobo
Le shelufu yomthi ekroliweyo kuyilo lwenyanga ekhuthazayo yenza ukufudumala kwendlu okukhethekileyo, iKrisimesi, uSuku loMama, okanye isipho sosuku lokuzalwa. Abathandekayo bakho baya kuba phezu kwenyanga!
1. I-OEM & ODM, Nabuphi na ubuchwephesha bomthi bunokwenziwa ngokwezifiso kwisitayile, umbala, ubungakanani, njl.
Umzi-mveliso we-Shunda Home Decoration ngumboneleli wezobugcisa womthi obonelela ngemveliso, uyilo, ukuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa kubathengi behlabathi. Inkampani yethu igxile ekwenzeni kunye nokuyila zonke iintlobo zeubugcisa kunye nemisebenzi yezandla iimveliso ezifana isipili senyanga, isipili seglasi, ishelufu yeenkuni, ishelufu yenyanga, ishelufu yeenkwenkwezi, ibhokisi yomthi, ibhokisi yesipho, isipho somthi njl.
Umgangatho ophakamileyo, iimveliso zexabiso ezikhuphisanayo kunye nenkonzo egqwesileyo kusukelo lwethu olungayekeleliyo. Ukufikelela kumava kwimveliso yezandla zomthi kunye nokuthumela ngaphandle bakholelwa kunokukunika amava entsebenziswano elungileyo. Ngeendlela ezintsha kunye nezahlukeneyo kunye nenkonzo ecingayo, iimveliso zethu ziphumelele ipralse kunye nokuthembela kwabathengi bethu, jonga phambili kumyalezo wakho kwaye wamkelekile kumzi-mveliso wethu.
Ngaphambili: Ukusebenza okuphezulu kwe-China Villa Post yangoku eNtofontofo yeGolide yePendant hlengahlengisa ukuphakama kwetafile emgangathweni ngesibane esicacileyo seCrystal Strip
Okulandelayo: Uyilo olutsha lwaseYurophu lwentsimbi yobhedu enekristale ekumgangatho ophezulu kunye nesibane sesibane selaphu lungisa isibane setafile esiphakamileyo kunye nesatifikethi se-3C
ibhokisi yesivalo se-acrylic
Ibhokisi yeCompartment Wooden
Ibhokisi yoMthi e-Eco-Friendly
Ibhokisi yoMthi eneHinged
Ibhokisi yoMthi exande
Ibhokisi yomthi yesikwere
Ibhokisi yeenkuni engagqitywanga
Ibhokisi yeenkuni eneLatch
Isakhelo seBhokisi yoMthi
ibhokisi yomthi ene-acrylic lid
Ibhokisi yoMthi eneSiciko
Ibhokisi yoMthi eneTshixo
Ibhokisi yomthi eneMirror
Ibhokisi yomthi eneSiciko sokuSlayida
Ibhokisi yeCraft yoMthi
Ibhokisi yeCraft yoMthi eneSiciko
Ibhokisi yesipho somthi
Ibhokisi yesipho somthi eneSiciko
Ibhokisi yokupakisha isipho somthi
Ibhokisi enehenjisi yomthi
Ibhokisi yeMakeup yoMthi
Ibhokisi yesithunzi somthi
Ibhokisi yokuGcina yoMthi
Iibhokisi zokugcina zokhuni
Ibhokisi yeeTishu zoMthi
Isigaba sokuhombisa seNyanga sentsimbi ekhandiweyo...
Ubuchule baseYurophu kuNyaka oMtsha iYea eNtsha...
PVC yomthi Wamkelekile Seahorse Animal Beach Door S...
Ibhaskithi yesibambi seTowel yePhepha eliMnyama eneshelufu yeKitc...